Ukuphupha iMirage Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ngubani kuthi ongathandiyo ukuzibandakanya kwimidlalo yamaphupha okanye ethembeni amaxesha ngamaxesha, kuya kuba mnandi kangakanani ukuba oku okanye oko kwenzekile ngokweembono zethu? Ufumana ithemba lakho kwaye ucinge ukuba, umzekelo, yonke into ngokuqinisekileyo iya kuhamba ngcono kakhulu ngomsebenzi omtsha kunaleyo indala.
Bonke oogxa babo babonakala benobuhlobo kwaye ngokuqinisekileyo banobuhlobo. Umphathi naye wenza uluvo olukhulu, ukusebenza apho kuyaqinisekiswa ukuba kuyonwabisa kakhulu. Ngalo lonke ulindelo, ngokuqinisekileyo awufuni kuva esi sivakalisi silandelayo: "Musa ukukhohlisa kakhulu, ayizizo zonke izinto ezibengezela njengegolide." Yeyiphi enye into ngaphandle kwesilumkiso sokuba ungalahleki kakhulu kwimibono emihle, kuba inyani ihlala yahluke kakhulu kwaye iyothusa kakhulu.
Ke amathemba, imibono namaphupha kuthiwa ziinkohliso. Abo baneembono ezingezizo, ke ngoko, ngengqondo engqongqo, bayitolika gwenxa inyani. Succumb ekukhohliseni umbono. Kodwa ngaba inkohliso ayilulo uhlobo lomqhubi? Into enika ithemba kwaye ihlala isivumela ukuba sizame okubonakala kungenakwenzeka? Ngaba ukubonakala kwamaphupha alo mfuziselo wamaphupha kujongeka kanjani kwaye ithini kanye kanye malunga nomntu ophuphayo?
1 Uphawu lwephupha «Illusion» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Illusion» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Illusion» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Illusion» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba ufumana inkohliso kwinqanaba lephupha, ingqalelo kufuneka ihlawulwe kwiinkcukacha zamava ephupha ngokuchazwa ngokuchanekileyo. Yayiyintoni engekhoyo kwaye waziva njani ephupheni?
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha kuhlala ubona isilumkiso kwisimboli yamaphupha "inkohliso", kananjalo nasekuvukeni kobomi. ngaphandle kobuqhetseba okanye unikezele kumathemba obuxoki. Ukuba iphupha libonisa imeko yekhonkrithi ebonisa imeko yokwenyani yephupha, oku ikakhulu kukuqhubekeka kwinqanaba lephupha, elibonisa ephupheni ukuba lomelele kangakanani inkxalabo yakho ngesihloko esibalulekileyo kuye nokuba zikhulu kangakanani. iingcinga. uyenzela ntoni le nto. Amaxesha amaninzi, inkohliso ihlala iyintoni na: ulindelo olunethemba okanye ithemba.
Kodwa iphupha lokuzikhohlisa nalo linokubizwa uphawu oluqinisekileyo Makuqwalaselwe. Oko kukuthi, xa ephupheni yonke into yaziva ilungile ephupheni kwinqanaba leemvakalelo kwaye izinto ezingekhoyo zazalisekiswa kwimeko ephuphileyo.
Ngokusisiseko, ke, uphawu lwephupha 'inkohliso' ayibonisi ukusilela okanye ubone ukuphoxeka. Ukuba kukho ukufana kunye el mundo ekuvukeni, iphupha kufuneka libajonge ngononophelo kwaye bazame, kunye namava ephupha, ukunika ujongo kwimeko.
Uphawu lwephupha «Illusion» - ukutolikwa kwengqondo
Inqanaba lengqondo lokuchazwa kwephupha libona ngokunxulumene "nokukhohlisa" komfanekiso wephupha uphupha njengomntu othanda ukuphupha umhlaba kubomi bokwenyani ngokuchanekileyo ngendlela afuna ngayo. Uyakuthanda ukufana umbono wakho wehlabathi Ukwenza kunye nakwilizwe lakho lokucinga akukho mida yokukhohlisa.
Uphawu lwephupha lunokutsala umdla wakho kwinto yokuba ungamqondi gwenxa umntu kwindawo ohlala kuyo okanye ungayivavanyi imeko ngokuchanekileyo. Ukutolikwa kwephupha kukucebisa ukuba uphinde ujonge uluvo lwakho kunye nembono, kungenjalo usengozini yokufumana enye ngempazamo yakho. ukuphoxeka ukufumana kakubi okanye ukhathaza omnye umntu.
Uphawu lwephupha «Illusion» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba elidlulayo, ukutolika kwamaphupha kuyaluqonda uphawu lophupha "inkohliso" njengenye Umzi wozakuzo Yovuko.